China Fluorobenzene Kugadzira uye Fekitori | Vakasununguka
CAS Kwete: 462-06-6
Musika: Pasi rose
Chitarisiko: Isina kuchena yakajeka mvura
Kuchena (GC): 99.9% min
Mvura: 0.03% max
200kg / dhiramu, 16Mt / FCL, 22mt / ISO tangi
UN Nha. 23777, Kirasi: 3, Kurongedza boka: II
☑ Yaishandiswa muindasitiri, mishonga, nemagetsi;
☑ Chigadzirwa chinonyanya kushandiswa mukugadzirira kweakakosha zvigadzirwa zveantipsychotic zvinodhaka, senge fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, nezvimwewo. mishonga yezvipembenene, mhondi dzemazai, mapurasitiki uye mapurimisi resin. Iyo condensation ye fluorobenzene ine γ - chlorobutyryl chloride inogona kuburitsa γ - chloro-p-fluorophenone, iyo inoshandiswa kugadzira haloperidol uye ndiyo unonyanya kushandiswa mushonga mu butyrylbenzene antipsychotic.
☑ Mune indasitiri yemagetsi, Inoshandiswa kumabhatiri ane kurongedza kwakakosha, hunyoro hwakanyatso kudzorwa; Fluorobenzene haigone chete kusimudzira kudyidzana pakati peLi + neDME, asi zvakare inodzivirira kuora kweDME kusvika pamwero wakati; Zvakare, fluorobenzene inogona kuderedzwa pamusoro pe lithiamu anode kuti iumbe LIF, iyo inogona kuwana dense interface yekuchengetedza dura nekukurumidza. Zvichienderana neiyi bifunctional hunhu, iyo yakanyanya electrolyte yakasanganiswa ne fluorobenzene haigone chete kugadzirisa zvakanyanya kudzikama uye coulomb kushanda kwe lithiamu anode (avhareji coulomb kushanda kuri 99.3% kana kugadzikana kutenderera kuri kudarika mazana mashanu mairi), asi zvakare inogona kushandiswa mune akateedzana anoshanda akazara bhatiri bvunzo mamiriro (kusanganisira yakakwira pamusoro nzvimbo, yakaderera tembiricha nharaunda, yakakwira yazvino kuwanda, Kwakanaka kuchovha kuita kwaiwanikwa neakaderera electrolyte zvemukati uye Ultra-yakatetepa lithium anode;
☑ Yakachena kuchena nonaqueous fluorobenzene yakashandiswa zvakabudirira muiyo electrolyte ye lithiamu-ion mabhatiri. Inofananidzwa neyakajairika electrolyte ine carbonate, mashandiro e lithiamu-ion mabhatiri anogona kuvandudzwa nekuwedzera yakawanda fluorobenzene, iyo ine yakajeka mikana maererano neakaderera-tembiricha mashandiro, hupenyu hwebhatiri uye yakakwira-tembiricha yekuyerera kugona. Fluorobenzene inogona kuunza mvura mukugadzira, kutakura uye kuchengetedza. Kana iyo yemvura yakanyanya kukwirira, inokanganisa iyo yemvura yezvinhu lithiamu-ion bhatiri electrolyte. Yakawandisa mvura yemukati ine chakakanganisa mashandiro emagetsi ebhatiri. Kazhinji, zvirimo zvemvura mune iyo electrolyte zvakanyatso kudzorwa;
☑ Chigadzirwa chinotenderwa nemakambani emishonga;
☑ Chigadzirwa chakagamuchirwa nevatengi veJapan kuti vashandise zvemagetsi. Tine hunyanzvi hwekubvisa hunyoro maererano nezve kugadzirwa, kurongedza uye kutakura, kuona mhando;
☑ Just-in-nguva Dhirivhari: 1 vhiki kubva kuShanghai imba yekuchengetera;
☑ chirimwa chiri padyo neiyo HF sosi, nekudaro kudzikisa mutengo uye kuona kugadzirwa kuri kuenderera;
☑ Tine yakakwana mhando manejimendi manejimendi, isina kuganhurirwa kune sampling, nzira yekuongorora, sampuli chengetedzo, Yakajairika mashandiro maitiro;
☑ Freemen inovimbisa kuchengetedza kwemhando yepamusoro, maitiro akaomarara ekutonga shanduko anoteedzerwa, kusanganisira maitiro nemidziyo, mbishi zvinhu, kurongedza;
☑ Muenzaniso unogona kusvika mumaoko ako mukati memazuva makumi maviri evatengi vekunze;
☑ Iyo shoma odha huwandu hwakatemerwa pasuru imwechete;
☑ Tichapa mhinduro kune yako kubvunza mukati me24hours, Dedicated technical timu ichatevera uye yakagadzirira kupa mhinduro kana iwe uine chero chikumbiro;
Welcome kuonana mamwe mashoko!
Pashure: Crotonic Acid